Abantu abaningi shayela uphawu sonwele siluhlaza ehlathini. Uphawu kwelanga, hot ezishisayo kakhukhunathi entendeni kubhekwa. Wonke umuntu e-umfanekiso ipharadesi zakudala - landscape asezindaweni ezishisayo amabhishi esimhlophe, esiluhlaza, ilanga elikhanyayo, okumangalisayo ahlanzekile, ecacile, namanzi aluhlaza kwezinye izindawo futhi njalo ... wesundu.
Lapho zikhula ukhukhunathi? Indaba yakhe ngempela ezaziwayo. Lokhu nokunye okuningi kungafundwa ngokufunda kulesi sihloko.
Kufanele kuqashelwe ukuthi isiko sasivumela okwandile lokhu Isithelo exotic kunomthelela isakhiwo ukubonga kwayo efanela manzi lula ukubhukuda emagagasini futhi unqobe ngale ndlela ibanga elide, ngokugcina freshness yabo.
Lapho zikhula ukhukhunathi? Indaba uya ukuthi, ngokusho kweminye imithombo, kakhukhunathi entendeni umsuka kuleli qoqo leziqhingi Malaysian. izithelo Izinsalela eziye zatholakala e-New Zealand. It is eyaziwa ukuthi entendeni iminyaka engaphezu 4000 iminyaka eNdiya zikhule. Ngakho-ke, ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi lolu hlobo wesundu umsuka kwi-Indian Ocean ogwini.
Ngakho, mhlawumbe, lapho kudabuka khona lolu kakhukhunathi kukhona mpumalanga ye-Asia, Polynesia, eNdiya, Pacific Islands, Hawaii, South Florida, eCaribbean futhi Southern California.
Eqinisweni, ukhuni yisona esikhulunywa abantu abaningi futhi kudingeka ezindaweni ezishisayo, futhi cishe a "emthini wokuphila." Futhi kuyiqiniso, ngoba zonke izingxenye zawo zisetshenziswa ezimpilweni zabantu.
Coconut isundu - ke ingenye izihlahla kakhulu lasendulo emhlabeni wonke, ezikhulayo ngisho ngenkathi izibankwakazi.
Lapho ukhukhunathi sikhule kulokho izwe? Lokhu Isithelo exotic namuhla ukhona endle, futhi ahlakulela ePhilippines, Afrika, Sri Lanka, eNingizimu Melika, e-India, Brazil, Thailand kanye Netherlands Antilles. Zonke kula mazwe zinezikhathi sezulu kuqhathaniswa ashisayo ezishisayo.
isiko labo Simila ikakhulukazi emazweni asathuthuka. Ukukhiqizwa yonyaka ka ukhukhunathi kuyinto emangalisayo. Minyaka yonke, cishe izigidi eziyizinkulungwane 17 uya nuts lapho ukhukhunathi zikhule. Philippines - umenzi eziholela emhlabeni. Ngaphezu kwakhe - Indonesia, iMalaysia naseNdiya.
Izithelo ukuthi waziwa kakhulu kusukela emkhayeni omkhulu Palm (cishe 1500). Kunezindlela 360 kuphela ngaphezulu ukuyisebenzisa, futhi ingxenye yabo axhunyiwe nokusetshenziswa ekuphekeni.
Lesi simila kuyinto enkabazwe kakhulu. Yande elihlobene ne-ratio womuntu balesi sihlahla (ukusetshenziswa of nati, izithelo, kokwehla yokufakelwa).
Lapho zikhula ukhukhunathi? Izithombe ukubukwa lezingu ulwandle ngokuvamile liyisici esibalulekile eHoreshi enhle angavamile. Lesi sikhungo singesokuqala e ubunjalo ingatholakala ogwini emikhawulweni ulwandlekazi nezilwandle, futhi emathafeni, kodwa ikakhulu inhlabathi anesihlabathi.
izimila ehlobene yokuthi kuphela indlela ukuhambisa kakhukhunathi yemvelo - phezu kwamanzi. Ukudlulela osogwini olusenyakatho ekude, ukhukhunathi, babe kakhulu izakhiwo manzi, babé ngempumelelo anqobe edlulela emasimini amasha. Palm ezikhulayo elifanayo ukusuka ogwini, zibangelwa yizenzo zabantu.
Coconut isundu endle
Lapho zikhula ukhukhunathi, njengoba liphathelene, zikhona amabhishi ahlanzekile. Lokhu paradise island lapho ungakhululeka nge cwilisa in kolwandle mnene efudumele.
Uyini kakhukhunathi? emgqonyeni Single njengoba ikholomu esimweni ovuthiwe kungase zifinyelela ubude obungamamitha angu-30 amamitha. Yena fancifully ibheke bedle isisindo izithelo eziningi kanye nezimo zemvelo ezihlukahlukene. entendeni Crohn lwaluba amaqabunga amakhulu kufika ku-6 metres ubude.
Mayelana 5 ubudala iqala izimbali, bese ngokushesha avele ngendlela nati, izithelo drupes. zikhula 6 izinyanga abavuthiwe usayizi, kodwa ezivuthiwe ngokuphelele zingabantu nje konyaka. Ngokuvamile zesundu ngonyaka ukukhiqiza cishe 25 enamasonto aphakathi, futhi kuhle eziningi nati kungenzeka kuze kube izicucu 70.
Sekukonke sokusinda isundu Uneminyaka ecishe ibe u-90, ngakho ngokuvamile kuba wokudla impahla ndaba nakwizizukulwane abo.
Lapho ukhukhunathi sikhule isiko? Emazweni eziningi zasezindaweni ezishisayo. Cishe eyayenziwe esekhulile entendeni izithelo iqala kusukela eminyakeni 7-9, futhi uqhubeka iminyaka engaba ngu-50. Izithelo ahlelwe amaqembu izingcezu kuya ku-20 ndawonye. Ngokuphelele evuthwa phakathi kwezinyanga 9-10. Isivuno isihlahla ngamunye ngonyaka kuba izithelo 60-120.
Lo muthi tropical esingavamile kuphela ilungu uhlobo lwe-Cocos, esinye sezihlahla ewusizo kakhulu emhlabeni.
Lapho ikhula kakhukhunathi, izithelo bheka kancane ehlukile kunaleyo abantu bekubona emashalofini amahholo kwezohwebo. Walnut inkulu kakhulu kunangendlela ezimweni zemvelo.
I yangaphandle emgodleni fibrous (ekzokarp) nut ivikela ke ekwindla. Igobolondo kwangaphakathi (endocarp) - igobolondo 3 ikhule ezimbotsheni efana iso. Bona kuholele ovules ezintathu, esinye sazo sibe inzalo ehlanganisa surface ungqimba omhlophe esinamanzi (ukushuba 12 mm) kanye endosperm (esobala futhi uketshezi - amanzi kakhukhunathi). Amafutha kokuvela copra therein elakhiwe, kancane kancane liphenduka emulsion Milky, bese gusteya osemanzi.
Eyokwakha bekholelwa bokhuni entendeni amahlamvu, kanye nokudla - izithelo. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi abantu abaningi lokhu kungaba ukufa isundu njengoba kakhukhunathi igalelo falling ekhanda lakho, ingaholela ngisho nasekukholelweni ukuthi ukufa. Ngokwezibalo wamanje ngonyaka kusukela ekwindla ka izithelo abantu abangaba ngu-150 zibulawa. Ngokwesilinganiso, kakhukhunathi isisindo imayelana 1 kilogram (wathola futhi 3-kg), futhi ishaya phansi nge ibutho 1 ton. I amahle kakhulu impahla yemvelo babe abakhileyo emazweni lapho kakhukhunathi ikhula.
Coconut esandisa namantongomane. Ukuze ukhule ekhaya, kufanele kube ingxenye izithelo ukuze ayifake phansi olungiselelwe ebhodweni. Ngokuvamile isitshalo esincane - isixha nezimo amahlamvu ezibanzi. Khona-ke, e-izihlahla ukhulile isiqu livela. Nokho, amathuba kokuthola izithelo ekhaya, ungase uthi, zero (ngisho zokugcina).
Qiniseka ukukhumbula okulandelayo: ukuze ukhule ube kakhukhunathi ekhaya, kumele usebenzise i-izithelo ezivuthiwe. Lena isimo kubalulekile.
Coconut kufanele ibekwe enhlabathini equkethe okuningi isihlabathi, ukuze amehlo zitholakala ngasesinqeni, ekugcineni kwahlaluka ukuthi ohlangothini (isikhundla cishe ovundlile).
Ukuze umsebenzi usheshe ukuhluma, kudingeka bahlale bagcine substrate olumanzi. Ikani itshalwe ziyadliwa kungaba isixazululo equkethe esincane uLwandle Lukasawoti. Ungafaka futhi ebhodweni nge nut ngoplastiki, njengoba lokho kuyosisiza ukuba silondoloze isimo ezifanele (umswakama high kanye lokushisa).
Coconut - isitshalo photophilous, okuyinto ekukhuleni evamile kudinga hhayi ngaphansi kuka 12 amahora yokukhanya. Kusukela ngo-May futhi kulo lonke ehlobo kudinga ukuthambisa ezinkulu izikhathi 2 ngesonto, futhi ngokuvamile - esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini ukuthambisa ngokulinganisela eyodwa kuphela. Zalisa kungenzeka izindlela esikhethekile entendeni futsi nekufakwa mullein.
Germinating amahlumela lokushisa elikhulu 24 ° C, futhi izitshalo omdala - mayelana 22 ° C.
Ngokuvamile, sikhule ekhaya usebenzisa izinhlobo ezilandelayo kakhukhunathi: Coconut Veddelya futhi yesikhumbuzo.
amanzi Coconut kuyisabelo sangaphakathi endosperm futhi engxenyeni engaphandle yalo - okungukuthi copra. Esesibili - umthombo amafutha kakhukhunathi, okuyinto umkhiqizo oluyigugu ngempela ngenxa yokuqukethwe kwabo acid ehlukahlukene okunamafutha. It is ikakhulukazi elisetshenziswa izinjongo ezempilo nobuhle.
Lokhu endosperm oily yesibili omisiwe namantongomane. Copra siqukethe izingcezu mhlophe noma aphuzi camera isikhumba. ukujiya zabo - 6.12 mm. Omunye nut ukunikeza 500 amagremu copra, okuyinto umkhiqizo ezidliwayo equkethe 9% amaprotheni, 6% amanzi, 16% ama-carbohydrate 67% amafutha.
Lapho ikhula kakhukhunathi, copra ukuvunwa ngesikhathi kwakucishe ngokusobala umsebenzi oyinhloko wabantu abakhileyo eziqhingini ezishisayo. Ezingamaqoqo (lapho kwakukhona izihlahla ezimbalwa) ngokukhethekile itshalwe nge nezihlahla zikakhukhunathi. Copra - umkhiqizo oluyigugu kwezohwebo, okuyinto Sekuyisikhathi eside adayiswa ezilwandle eningizimu. Futhi namhlanje, ke waziphatha workpiece.
Ahola enkulu ezibhekwa basePhilippines copra. Vuna it njengoba izinkampani ezinkulu, kanye nabalimi.
Kuyaphawuleka ukuthi ngenxa omiswe engafanele copra kuso ingaqala isikhunta ezikhiqiza ushevu obulalayo (Aflatoxin). Lona umdlavuza enamandla kakhulu kungabangela isifo sesibindi. Copra e ukudla akakwazi ukudla, kodwa bayidayise. Kule uwoyela etholwe, futhi etholwe izindlela zezimboni, emsulwa.
Coconut isihlahla "Arheydzhe"
Lapho zikhula ukhukhunathi? "Arheydzh" (Korean fantasy bakamalalahlengezela yabadlali abaningi umdlalo inthanethi) njengoba yezinto umdlalo usebenzisa kakhukhunathi. Action in the Umdlalo senzeka yonke (fantasy world) ArcheAge. Coconut lapha, kanye kunoma iyiphi enye juice izithelo zingenziwa. Umsebenzi wawo obaluleke kakhulu e ArcheAge - womshini lacquered isakhiwo adingekayo ukuze kudalwe izulu lesikhumba zempi. Futhi nail lokhu, ungakwazi noma adayise noma asebenzise i ukudala imishini yabo.
Lapho kakhukhunathi ikhula kuleli zwe oqanjiwe?
Enhlabathini, ukhuluma amatshe.
Ngo ArcheAge kakhukhunathi entendeni - esinye salezi izihlahla, izitshalo esingenakubalwa wathenga kubahwebi Consortium. Futhi izithelo umdlalo ezidingekayo kulo ukuze likhiqize amanye potions ewusizo nemvunulo yempi kukanye nani engcono.
Ekugcineni, cishe izakhiwo ezimangalisayo komkhiqizo
Esikhathini inkathi 1941-1945 (Pacific neMpi) izinhlangothi eziphikisanayo esetshenziswa ekwelashweni kwe-amanzi kakhukhunathi kwalimala njengenhlangano "okunye" kuya-plasma. Leli yithuluzi sasivumela enemisebenzi efanayo womuntu plasma yegazi.
Ngaphezu kwalokho, amanzi kakhukhunathi e ngezithako zawo ezinempilo kunanoma ubisi lonke. It has no-cholesterol ne fat kancane. Izakhamuzi ezishisayo babe Akumangalisi nenzuzo ezicini zonke izitshalo zemvelo.
Owadlayo inhloli semvelo ekuthunjweni?
Izinhlobo ezaziwa izimbali: igama nesithombe
Ukuphulukisa futhi magic amatshe: chalcedony
Mineral izinsiza Russia nencazelo yawo
Utamatisi: ezikhulayo kanye namathiphu ukunakekelwa
"Sildenafil citrate": ebuyisa isikhathi! Ukubuyekeza, intengo kanye yokusetshenziswa
Umhlaba ikhathalogi inthanethi: 4fresh.ru esitolo
Kuyinsakavukela yamanzi ukusetshenziswa kanye lamanzi anokugcola. Isimiso of edamu lamanzi ukusetshenziswa
WASHINGTON (entendeni): ezikhulayo ekhaya, izithombe